Guryo badan oo uu ka dhaco ganacsiga galmada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ganacsiga jirka. sawir: Vilhelm Stokstad / TT
Guryo badan oo uu ka dhaco ganacsiga galmada
La daabacay tisdag 2 juli 2019 kl 11.34
Qofka gurigiisa kireeya isagoo metelan isticmaalaya bogagga internetka sida Airbnb iyo Blocket ayey ku dhici kartaa in gurigiisa laga sii kireeyo qof kale oo degaanka u isticmaala goob looga ganacsado jirka.
Boliiska ayey u muuqataa iney sii kordhayaan dadka guryaha ka kireysta bogagga internetka sida Airbnb och Blocket kuwaasoo guryahaa ka sii kireeya qof sadaxaad oo ka shaqeeya ganacsiga galmada.
Dadka ku howlan ganacsiga galmada ayaa xiriir ka abuura bogagga internetka ee xayeysiiya galmada iyadoo boliisku arkay inuu danbiga noocan ahi sii kordhay sanadkii 2018.
Kajsa Wahlberg, sarkaal boliisa oo ha howl-gasha Nationella Operativa Avdelningen, Noa.
– Waxa jira sakhsiyaad la xiriira bogagga xayeeysiiya galmada halkaasoo ay jiraan lambaro telefoon oo la waco. Qofkaa ayaa kadib soo bandhiga inuu hayo guri kiro ah. Taa waxey keeneysaa in dadka ka ganacsada jirka iyo kuwa suuq geeya dumarka iyo ragga aaney u baahan iney la xiriiraan shirkad guri, ayey tiri Kajsa Wahlberg.
Kajsa Wahlberg ayaa sidoo kale sheegtay in arrintani sii korortay sanadki 2018 iyadoo dadka arrimaha ku howlan isugu jiraan kuwo aan danbi horey u galin iyo kuwo danbiilaa intaba.
Dadka ugu badan ee lagu askhateeyo iibinta galmada Sweden ayaa howshaa ka fuliya guryo gacan labaad lagu kireeyey sida ay sheegtay Kajsa Wahlberg oo ka socota boliiska. Arrintan ayaa badanaa ka dhacda magaalooyinka waaweyn iyadoo ay Stockholm tahay meesha ugu badan uu ka dhaco ganacsiga galmada ee loo isticmaalo guryo loo kireystay si ku meel gaara.